काठमाडौं । जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना नगरे कोरोनाको संक्रमणको भयावह अवस्था आउने जनस्वास्थ्यविद्हरूले चेतावनी दिएका छन् । दोस्रो चरणमा देखा परेको कोराना संक्रमण पहिलाको तुलनामा बढी सर्ने खालको रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा डा. शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो ।
यूके भेरियन्ट भाइरसले साना बालबालिकालाई आक्रमण गरेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरी खेलवाड गरे गम्भीर समस्या आउने खतरा रहेको उहाँको भनाइ छ । अहिले देखा परेको संक्रमणले बालबच्चालाई असर गरेको बताउँदै उहाँले बालबालिका हस्पिटल भर्ना हुनेको बृद्वि देखिएको बताउनुभयो । अहिले देखापरेको भाइरस उमेर सिफ्ट गरेको र फरक खालको भाइरस भएकाले पहिलाको तुलनामा बढी सावधानी हुन उहाँको सुझाव छ ।
पछिल्लो स–साना बालकालिकालाई कोरोना संक्रमणको जोखिममा परेको बताउँदै विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे ठूलो संकट आउने जनस्वास्थ्य विद् डा. शरद वन्तको भनाइ छ । नागरिकका पछिल्ला गतिविधिमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई राम्ररी पालना नगरेको देखिएकाले नेपालमा कोरोनाको महामारी पुनः दोहोरिन सक्ने खतरा रहेको उहाँको चेतावनी छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, बैशाख ३, २०७८, ०१:२१:०८